Savalalana fampahafantarana momba ny fibahanana ao Ozbekistany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2019 4:23 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny mey 2005)
Milaza ny andininy fahadimy momba ny lalànan'ny fampitam-baovao ho an'ny daholobe amin'ny fahalalahan'ny fampitam-baovao ao Ozbekistany: ”Malalaka ny fampitam-baovao ho an'ny sarambabem-bahoaka ao amin'ny Repoblika Ozbeka… manan-jò hanao zavatra ao amin'ny fampitam-baovao ho an'ny sarambabe ny tsirairay, haneho ny heviny ary handresy lahatra an-kahalalahana rehefa tsy mifanipaka amin'ny lalàna… ny fampitam-baovao ho an'ny sarambabe no tompon'andraikitra amin'ny fahamarinan'ny fampahafantarana naparitaka”
Andininy faha-7 amin'io lalàna io ihany no miresaka ny tsi-fetezan'ny fibahanana: “Tsy azo ekena ny sivana amin'ny media ho an'ny sarambabe ao amin'ny Repoblika Ozbeka”.
De jure, afaka amin'ny fanaraha-mason'ny governemanta ny fampitam-baovao ho an'ny sarambabe ao Ozbekistany ao amin'ny lalàna. De facto [ny zavamisy], misy bilaogy sasantsasany bahanan'ny governemanta noho ny fisian'ny fanehoan-kevitra na torohay miiba momba ny filoha sy Ozbekistany amin'ny ankapobeny.
Ny UzNet, an'ny governemanta, no mpitsinjara ny aterineto ao Ozbekistany amin'ireo mpanome tolotra aterineto hafa. Iray amin'ny fomba fibahanan'ny governemanta ny fanakanana bilaogy any amin'ny cybercafé. Indraindray ny mpitantana cybercafé no manemotra ny fivoahan'ny habaka “mampiahiahy” izay mifanipaka amin'ny drafitry ny governemanta amin'ny lisitra mainty. Tsy izay bilaogy ao an-toerana ihany no mety ho voasakana, fa izay bilaogy vahiny “mampisalasala” ihany koa. Fomba iray hafa amin'ny fibahanana ihany koa ny mibahana any amin'ny lohamilina ankapobeny.
Misy ireo tranga sasantsasany, rehefa te-hanamarina ny fibahanany ny governemanta fa te-hiaro ny tanora amin'ireo torohay tsy voamarina momba ilay fanjakana mahaleotena izy.
Mitory bilaogeraizay maneho ny heviny amin'ny lafiny miiba amin'i Ozbekistany, eny amin'ny fitsarana amin'ny fomba maro ny governemanta, :
Indraindray antsoina any amin'ny polisy hosasana atidoha ny bilaogera
Mety ho voaroaka amin'ny asany na manana olana amin'ny fitadiavana asa noho ny toe-javatra maro samihafa ny bilaogera.
Tompon'andraikitra amin'izay torohay navoakany ny bilaogera, satria efa nampitoviana amin'ny fampitam-baovao ho an'ny sarambabe ny aterineto. Rehefa tsy tian'ny governemanta ny torohay, dia azo tombanana ho diso. Amin'ny tranga rehetra mety saziana ara-mpombafombam-panjakana ny bilaogera amin'ny voalohany fa mety ho tonga hatrany amin'ny fombafombam-pitoriana heloka bevava izany.
Araka ny loharanom-baovao dia tsy mbola nisy aloha fitondrana bilaogera ho any amin'ny fitsarana.
Amin'izao fotoana izao ny bilaogera Ozbeka manana olona amin'ny fanavaozana ny bilaoginy. Indraindray ry zareo mba amoahana torohay no mandefa imailaka izany amin'ny namany monina ivelan'i Ozbekistana izay mamoaka izany ho hitan'ny besinimaro. Mampihena ny fombafomba demaokratika ao amin'ny firenena izany. Tsy ny bilaogera rehetra no manana namana azo itokisana ivelan'ny fireneny ka mangataka ny hamoahana ny lahatsoratrao vaovao isaky ny mety hanahirana ilay lahatsoratra. Araka ny nolazain'ny loharanom-baovao, ny asa lehibe indrindra dia ny mampianatra ny bilaogera Ozbeka ny hanavao ny bilaogin-dry zareo voabahana rehefa tratran'ny toe-javatra tahaka izany. Miantso vonjy amin'ireo vahiny manampahaizana manokana amin'izany ny loharanom-baovao hitady ny vahaolana amin'izany ho an'ny bilaogera Ozbeka.